နယူးကာဆယ်ကိုငြင်းပြီး ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ကွယ်ကအဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဖလက်ချာ - UMN
နယူးကာဆယ်ကိုငြင်းပြီး ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ကွယ်ကအဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဖလက်ချာ
May 5, 2020 May 16, 2020 - by United News - LeaveaComment
ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒါရင်းဖလက်ချာ က ဆာအဲလက်စ် ရဲ့ ‌စည်းရုံးမှု့သာ မပါခဲ့ရင် သူ့အနေနဲ့ ယူနိုက်တဒ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ်နဲ့အတူ ၁၅ရာသီနီးပါး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဖလားအားလုံးလည်းရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ စကော့တလန်သား က ယူနိုက်တဒ်မှာ အဓိက ကစားသမားမဟုတ်ပေမယ့် မရှိမဖြစ် ကစားသမားတော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖလက်ချာ ကို ဆာအဲလက်စ်က စွယ်စုံအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ နောက်ချန်တိုက်စစ်၊တစ်ခါတစ်ရံ နောက်တန်းခံစစ်တွေအထိ ထားသုံးဖူးပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် ကို မပြောင်းရွှေ့ခင်မှာ သူ့ကို နယူးးကာဆယ်အသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပြီး ဆာအဲလက်စ် သာ မစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ရင် သေချာပေါက် နယူးကာဆယ်အသင်းကိုပဲ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖလက်ချာက” အဲ့ဒီအချိန်တုန်း က နယူးကာဆယ်နဲ့ မန်ယူနိုက်တဒ်တို့က ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားအတွက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရချိန်ပေါ့။နယူးကာဆယ်ကအဲ့တုံးက အဂ်လန်ရဲ့ဒုတိယအကောင်းဆုံးအသင်းအဆင့်အနေထားထိရှိတယ်လေ။နယူးကာဆယ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို တကယ်သဘောကျပါတယ်။သူတို့က သိပ်ကောင်းတဲ့လူတွေပါ ကလပ်ကလည်းတကယ်ကြီးကျယ်တယ်လေ။ဒီထက်တော့ ဘယ်လိုပိုပြောရမလည်း? သူတို့ဆီကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုနီးပါးအခြေနေကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တူံးက မန်ယူနိုက်တဒ် နဲ့ နယူးကာဆယ် မှာ တူညီတဲ့အချက် များစွာရှိနေတယ်လေ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အချိန်ကသိပ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။မန်ယူနိုက်တဒ်ကိုရွေးခဲ့ရင်လညိးပျော်ရမှာပဲ။ဒါပေမယ့် ကလပ်ထပ် အဝတ်လဲခန်းမှာ အသင်းဖော်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေစကားပြောပြီး ပျော်ရွှင်မှု့ရတာကိုပိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။”
“နယူးကာဆယ်မှာတော့ အသင်းကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်သလို အဝတ်လဲခန်းနဲ့ သူတိူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေက ကျနော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒီတော့ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ ငါ နယူးကာဆယ်ကိုသွားမယ်လို့ပေါ့။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး တနေ့ ကျနော့်အိမ်ကဖုန်းမြည်လာတယ် ကျနော့်အစ်မကသွားကိုင်ပြီးတော့ ဒါရင်းရေ ဒါမင်းဖုန်းပဲ‌လို့ပြောတယ်။ကိုင်လိုက်တော့ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့ဖုန်းဗျ၊။ သူကလုံးဝကိုစိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြစ်နေတာ။ကျနော်က ၁၅ နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ လုံးဝကိုပါးစပ်အဟောင်းသားပဲ၊ဘာမှကိုပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ ”
” သူက စကားလုံးတွေကို ဖုန်းကနေမနားတမ်း ပြောဆိုနေတာဗျ။ကျနော့်အမေကဖုန်းကိုလုယူလိုက်တယ် ။ ဘာလို့ဆို ကျနော့်ပုံကအတော်လေးသွေးမရှိတဲ့လူ လို ဖြူနေပြီ။သူမက အချိန်နည်းနည်းထပ်နားထောင်ပြီးတော့ အိမ်ကိုဖုန်းထပ်မဆက်ဖို့ပြောပြီး ချလိုက်တယ်။ကျနော်လည်း လုံးဝလန့်သွားတယ် ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်းပေါ့။ နောက်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျနော့်အဖေဆီကို တောင်းပန်ကြောင်း ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်လေ။ကျနော့်အဖေက ကျနော်နယူးကာဆယ်ကိုပြောင်းချင်နေတာ သူသိတယ်။အိမ်နဲ့လည်းနီးတာကိုး။ဒါပေမယ့် အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်က မှန်ကန်ခဲ့တာ အခု မြင်နေရပြီမဟုတ်လား” ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ကှငျးလယျကစားသမား ဒါရငျးဖလကျခြာ က ဆာအဲလကျဈ ရဲ့ ‌စညျးရုံးမှု့သာ မပါခဲ့ရငျ သူ့အနနေဲ့ ယူနိုကျတဒျကိုပွောငျးရှဖွေ့ဈမှာ မဟုတျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျနဲ့အတူ ၁၅ရာသီနီးပါး ဖွတျသနျးခဲ့ပွီး ဖလားအားလုံးလညျးရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ စကော့တလနျသား က ယူနိုကျတဒျမှာ အဓိက ကစားသမားမဟုတျပမေယျ့ မရှိမဖွဈ ကစားသမားတော့ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဖလကျခြာ ကို ဆာအဲလကျဈက စှယျစုံအသုံးပွုလရှေိ့ပွီး တဈခါတဈရံ နောကျခနျြတိုကျစဈ၊တဈခါတဈရံ နောကျတနျးခံစဈတှအေထိ ထားသုံးဖူးပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျ ကို မပွောငျးရှခေ့ငျမှာ သူ့ကို နယူးးကာဆယျအသငျးကလညျး စိတျဝငျစားနခေဲ့ပွီး ဆာအဲလကျဈ သာ မစညျးရုံးနိုငျခဲ့ရငျ သခြောပေါကျ နယူးကာဆယျအသငျးကိုပဲ ပွောငျးရှဖွေ့ဈလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဖလကျခြာက” အဲ့ဒီအခြိနျတုနျး က နယူးကာဆယျနဲ့ မနျယူနိုကျတဒျတို့က ပရီးမီးယားလိဂျဖလားအတှကျ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျနရေခြိနျပေါ့။နယူးကာဆယျကအဲ့တုံးက အဂျလနျရဲ့ဒုတိယအကောငျးဆုံးအသငျးအဆငျ့အနထေားထိရှိတယျလေ။နယူးကာဆယျနဲ့ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေို တကယျသဘောကပြါတယျ။သူတို့က သိပျကောငျးတဲ့လူတှပေါ ကလပျကလညျးတကယျကွီးကယျြတယျလေ။ဒီထကျတော့ ဘယျလိုပိုပွောရမလညျး? သူတို့ဆီကိုပွောငျးရှဖွေ့ဈဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခလြုနီးပါးအခွနေကေိုရောကျခဲ့တယျ။အဲ့ဒီအခြိနျတူံးက မနျယူနိုကျတဒျ နဲ့ နယူးကာဆယျ မှာ တူညီတဲ့အခကျြ မြားစှာရှိနတေယျလေ။ဆုံးဖွတျခကျြခရြတဲ့အခြိနျကသိပျကိုခကျခဲပါတယျ။မနျယူနိုကျတဒျကိုရှေးခဲ့ရငျလညိးပြျောရမှာပဲ။ဒါပမေယျ့ ကလပျထပျ အဝတျလဲခနျးမှာ အသငျးဖျောတှနေဲ့ အဆငျပွပွေစေကားပွောပွီး ပြျောရှငျမှု့ရတာကိုပိုကွိုကျနှဈသကျပါတယျ။”
“နယူးကာဆယျမှာတော့ အသငျးကိုလညျးကွိုကျနှဈသကျသလို အဝတျလဲခနျးနဲ့ သူတိူ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြအနထေားတှကေ ကနြျောလိုခငျြတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ဒီတော့ကနြျော ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ဟုတျပွီ ငါ နယူးကာဆယျကိုသှားမယျလို့ပေါ့။ဒီဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး တနေ့ ကနြေျာ့အိမျကဖုနျးမွညျလာတယျ ကနြေျာ့အဈမကသှားကိုငျပွီးတော့ ဒါရငျးရေ ဒါမငျးဖုနျးပဲ‌လို့ပွောတယျ။ကိုငျလိုကျတော့ ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျရဲ့ဖုနျးဗြ၊။ သူကလုံးဝကိုစိတျဆိုးမာနျဆိုးဖွဈနတော။ကနြျောက ၁၅ နှဈပဲရှိသေးတာလေ လုံးဝကိုပါးစပျအဟောငျးသားပဲ၊ဘာမှကိုပွနျမပွောနိုငျဘူး။ ”
” သူက စကားလုံးတှကေို ဖုနျးကနမေနားတမျး ပွောဆိုနတောဗြ။ကနြေျာ့အမကေဖုနျးကိုလုယူလိုကျတယျ ။ ဘာလို့ဆို ကနြေျာ့ပုံကအတျောလေးသှေးမရှိတဲ့လူ လို ဖွူနပွေီ။သူမက အခြိနျနညျးနညျးထပျနားထောငျပွီးတော့ အိမျကိုဖုနျးထပျမဆကျဖို့ပွောပွီး ခလြိုကျတယျ။ကနြျောလညျး လုံးဝလနျ့သှားတယျ ဘာတှဖွေဈနတောလညျးပေါ့။ နောကျငါးမိနဈလောကျကွာတော့ ကနြေျာ့အဖဆေီကို တောငျးပနျကွောငျး ဖုနျးဆကျလာခဲ့တယျလေ။ကနြေျာ့အဖကေ ကနြျောနယူးကာဆယျကိုပွောငျးခငျြနတော သူသိတယျ။အိမျနဲ့လညျးနီးတာကိုး။ဒါပမေယျ့ အတိတျကို ပွနျကွညျ့လိုကျရငျ ကနြေျာ့ဆုံးဖွတျခကျြက မှနျကနျခဲ့တာ အခု မွငျနရေပွီမဟုတျလား” ဟု ဖှငျ့ဟပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဥရောပမှာ အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတခုကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်အတွဲ
အငှားထွက်ကစားဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒီကစားသမား
အရန်လူစာရင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့် ဆိုးလ်ရှား
Previous Article ဆာအဲလက်စ်က အနားမယူခင်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ အကောင်းဆုံးကစားသမား(၂)ဦးကိုခေါ်ယူပြီး အကြံကြီးခဲ့သေးကြောင်း အီဗရာဖွင့်ဟ
Next Article ပေါ့ဘာရဲ့အနာဂတ်နဲ့ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ပိုင်းကို ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဂိုးသမားဟောင်း
Copyright © 2021 UMN.